နွေးနွေးတဲ့မိခငဘ်ဝခရွေးလမ်ွေး – Medical Travel Media Awards 2019
မလ ေးရ ေးနငို င် ရံ နဲ့ မညလ််အဆလို်Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin န စဲ့ ေးပ ေးလရေး ပို ်ငနေး် ရင် Datuk Seri Khalid Mohammad Jiwa ဟို ဲ့ သူ ရို ဲ့ ပဲ့ ထမဆေးံို သမေးလ ေး ရို ဖို ၁ဲ့ ၁နစ်က လစ ငခ်ဲ့ ရဲ့ ပ ယ။်
၂၀၀၆ခနိုစ်မ အသ ်၂၇ရပပဖဖစ် ဲ့Sitiဟ အမ်လထငဖ်ပြုဖပြုခငေး်ပမသေးစိုဘဝလ ေး ို သဘဝအငိုေး်စငဖ်ိုကဲ့ြုေးစေးခပဲ့ယ။်သေးံိုနစအ်ကမလဲ့ဖနပ်ပနသ်လနသေေးနညေး်ပညin-vitro fertilization (IVF) န ဲ့ ယို ဝ် နယ် ဖူ ို စဲ့ ဉေးစ ေးခဲ့ ယ။်
“အမ်လထငဖ်ပြုဖပြုခငေး်မ လေးခိုငခ်လဲ့ပမယ်ဲ့ထငသ် ဖိုဖစ်မခဘဲ့ေးူ။ လူ လဲ့ အမြုေးမြုေးလဖပ က လဖပ က လပ.ဲ့.ပို ဆ် လံ အမ ေးက ေးရ ခခို ို ပို ်သင်ဲ့ ယ်ဆပိုပေးလ ”ဲ့ Bintang HMI 1995 ဆပို ငို ရ် င် Siti လဖပ ပ ယ။်
Khalid အရငအ် မ်လထ ငန် သဲ့ ေးလ ေးလယ ထ် နေး် ေးခလဲ့ ဲ့ လူ Siti အလပေါ် ပိုဖအ ေးလပေး အ ရိုံစို်က ယ။် Sitiဟ အနပို ည အသငို ေး်အဝိုငေး်မ ၂၆နစ်လ်င် ညခ် လဲ့ ဲ့
လူ ရလဲ့ဝဖနမ်ှုလလက ငသ်ဲ့ပ်လ ဲ့မနို်ပှု်ခပဲ့ဘေးူ။
“ ျွနမ် နိုဲ့စ်လယ်မသ ေးစိုလ သငူ ယခ် ငေး်လ အက လံ ပေးသမျှနညေး် မ်ေးလ အ နို ်
ို်ပို်က ည်ဲ့ ယ”် ိုSဲ့iti လဖပ ယ။်
သူ ဇို ဲ့ နေးလမ ငန် ဟံ ၂၀၀၉ ခနို စ်မ လ ဲ့ မပ် မူ ရ ဲ့ Alpha မ ြုေးဆ ပ် ေးလဆေးရိုမံ IVF
ဖနပ်ပနသ် လနသေ ေးဖပြု ပို ်ဖိုဆဲ့ ေးံိုဖဖ ခ် ကဲ့ ပ ယ။်
“ ျွမ်ေး ငသ် လူ နဲ့ ငို ပ် ငပ်ပေး မြုေးဆ ပ် ေးနညေး် မ်ေးအမြုေးမြုေး (Assisted Reproductive Technology-ART) စိုဉေးစေးပပေးလဲ့နမ် IVF ပို်ဖိုပဲ့ဆေးံိုဖဖခ်ဲ့ယ။် ျွနမ်ိုဲ့ အမလ ေးလ င် ခို င် ” ိုသဲ့ မူ လဖပ ယ။်
၂၀၁၇ ခနို စ်မ မလ ေးရ ေး နေး် မ လရေးလစ ငလ်ဲ့ ရ မ် ှုလ ငစ် မလ ေးရ ေးနငို င် ဟံ မဘ လပေါ်မ မြုေးဆ ပ် ေး နေး်မ လရေးအ်အလ ငေး်ဆေးံိုလနရ ခဖိုဖစ်လက ငေး်လဖ ်ဖပခပဲ့ ယ။် အဖခ ေးနငို င် မံ ေးရ ဲ့ ဖနပ် ပနသ် လနသေ ေးလအ ငဖ် မငမ် ှုနနှု ေး် ၅၀%ရခ နမ် မလ ေးရ ေးနငို င် ရံ လဲ့ အ ငဖ် မငမ် ှုနနှု ေး် မ ၆၅%ရခပဲ့ ယ။်
ဖနပ်ပနသ်လနသေေးနညေး်ပညဆို အမြုေးသမေးရသဲ့ေးဥနဲ့ အမြုေးသေးရသဲ့ိုပ်ိုေးိုဲ့ို ဓခ်ခနေး်အငေး်မစနစ် လပငေး်စပ်လစပပေးဖဖစ်လပေါ် သဲ့လနသေေးလငေး်လေးိုအမြုေးသမေးရဲ့ သ ေးအမ်အ ငေး် ဖပန် ညထ် ညသ်ဲ့ ငေး် လပေးဖခငေး် ဖဖင်ဲ့ ယို ဝ် နလ် ဆ ငဖ် ခငေး် ို ဖဖစလ် ပေါ်လစပ ယ။်
စ်က မ်ဖပြု ပို်င်နစ်ပ ခ် နက်ဲ့ ဖမငပ်ဲ့ပေးSiti လ ဲ့သေးံိုက မ် ငို်ငို က် ြုေးစ ေးခရဲ့ ပ ယ။် ဖနပ်ပနသ်လနသေ ေးခရေးစဉဟ စပ်ငပ်နေး်စရလ ငေး် ယ်ိုဲ့
အမ ြုေးသမေးအမ ေးစို လဖပ က လပမယ်ဲ့ Siti လ ဲ့ သပ်မဆေးို ပ ဘေးူ လို ဲ့ ဖပ ယ။် ဒဆသိုမူအိုငအ်ေးလရလစခဲ့ဘ?
“ ျွနမ်ဘယ် နိုေး် မ လမျှ် ငခ်ဲ့ မ်လပ ခ်ဘဲ့ ေးူ။ အဆ မ်ဖပ က် ြုေးစေးလနသအူ ဆို ဒဆ် ို လရ်မ ပဆို ယကံို ည် ယ”် သို ဲ့ မူ လဖပ ပ ယ။်
“ခလို လဲ့စငရ်ဲ့ ြုေးနပ်ခပဲ့ပပ”ထိုဲ့ပ်လဖပပယ။် သတငွေး် န ောငွေး်
၂၀၁၇မ ဖနပ်ပနသ် လနသေ ေးလအ ငဖ်မငခ် လဲ့ ပမယ်ဲ့ Sitiဟ လအ်ဘို ယိုဝ်နလ် ေးရအဲ့ခနမ်လကဖငခပဲ့ ယ။်
အ ပို်လ ညေး်နေးခရဲ့
ယအက မ်လဖမ ဖ် နပ်ပနသ် လနသေ ေးမိုဲ့ ပိုဲ့ ”
ယို ဝ် နပ် ထမသေးံို မ အပ်ယ ထမ ပ အန ေးယလူ စခဲ့ ယ။်
ရှုေးပလ အ နို န် ေး ို်ယ၊် ဓ ပ် ံိုရို လ် ညေး် န ေးထ ေး ယ။် ျွနမ်အမြုေးသေးခပပေးပိုလဲ့ပေးယ”် သိုဲ့မူဂရိုစိုလ်နခပဲ့ံိုရိုငေး်ဖပပယ။်
လ ငေး်လ ငေး်အန ေးယပူပေး နေး်မ အဲ့ စ ေးလ လရေးစ ေး ယ။် ဝေးခနလဲ့ ငသ် ေး ယ၊် ဒမမဟို ်
Sitiဟသမူရလဲ့နေးလထေးဲ့မခငဘ်ဝခရေးမေး် ိုသခငေး်လေးလရေးစပ်ခပဲ့ ယ။်
“ခစ်စရ ပေးနနလ ေး” ိုဲ့ဘ သ ဖပန် ရိုဲ့ ဲ့သ ေးလခ လဲ့ ေး ိုသမူ ရယဲ့ူျူ့DatoSNurhaliza VevoChannelမ မ်၂၈ရ လ်နဲ့ ငခ်ဲ့ က ညရ်ဲ့ှုသလူပငေး် ၃.၃သနေး်၊နစသ် သ် ူ၆၆,၀၀၀နဲ့ မခ် လ်ပငေး်၂,၀၀၀ခိုရရအဲ့ထလအငဖ်မငခ်ပဲ့ ယ။်
“မခငဘ်ဝဟသပ်ဆနေး်ကယ်ယ။် Aafiyah လေးဟသပ်ခိုစစ်ရလငေး်ယ။် ျွနမ် ဘယသ် ေးသ ေးသူ ဲ့ လို ခေါ်သ ေးခ ငလ် ဲ့ ပ။ ခလို ဲ့ ျွနမ် အဖပငသ် ေးရငမ် ပ မဖဖစ်
Sitiနသဲ့ မူ ရအဲ့ မ ြုေးသ :Khalidဟ အခဆို ို သူ ို ဲ့ ို ဘဝ မူ ဘလ ငေး် လ ို ညူ ဖိုအဲ့ ်
YayasanNurjiwaမ မြုေးဆ ပ် ေးစင် စ်ခို လို ဆ်ပို ်ဖိုကဲ့ ြုေးပမ်ေးလနက ပ ယ။် လေးခိုင်စဲ့ိုံလအ ်ညေး်ခိုအိုကလံပေးပ ယ။်
“စ ရ်ညပ် ။ ခနေ ယို လ်ရ
ဦေး န ဲ့ ဦေး န ေး ညလ် ပေး ဖို ဲ့ အို ပ် ပ ယ။် မ ခငလ်
စ ပ် က ဲ့ခံငိုဖ်ိုဖပဲ့ငဆ် ငထ် ေးပ။ ဟ ခနေယို လ် ဖပ ငေး် မ ှု လ သ မ
စ ပ် ိုငေး် ဆငို ရ် လဖပ ငေး် မှုလ ပ က ြုံ ရ ယဆ် ို အခအ်ခကြုံရင်အအူညလငေး်ဖိုဝဲ့နမ်လေးပန”ဲ့ လိုဲ့ဖပပယ။်
လ ေးလန်လယ ယ် ဦူ ေးမ ေး?
“ယမူ လပ၊ဲ့ သပ်မက ခငမ် လ ေးလ ေး လယ ထ် ပ် ခို ငလ်သေး ယ၊် လန န် စ်နစ်လ က် ရငလ် ပ ”ဲ့ သို ဲ့ မူ လဖပ သ ေးခပဲ့ ယ။်
ဘယအ်ခနမ် ဖနပ်ပနသ်လနသေ ေးဖပြုပို်သင်ဲ့?
မ ြုေးဆ ပ် ေး နေး် မ လရေးနညေး် မ်ေးလ အမ ေးက ေးထ မ ဖနပ်ပနသ်လနသေေးနညေး်မေး်ဟ
သေးဥပပနပ် လ်နသသမူ ေး ိုဲ့
ဖခေးလေးမရသဲ့လူ အ ်
ပထမဆေးံို ဖပြု ပို ်ရမယန်ဲ့ ညေး် မ်ေးလ မဲ့ ဟို ပ် ဘေးူ
ဘ ယ သ် လူ ဖ ပ ြု ပို်သ င်ဲ့ ?
သေးဥအမ်လရအ်ညဖ်ခငေး်
သို ပ်ိုေးအရညအ် န်ညေး်ဖခငေး်
သ ေးအမ်နင်ဲ့သ ေးဥပပနဖ်ပဿန မ ေး
အလက ငေး် အရငေး် ရမလ ျူ့သမူ ေး